Maxaa Keena Furniinka? – Fatwa Somali
Su’aal Soo Gudbi
Maxaa Keena Furniinka?
/Qoraal /Maxaa Keena Furniinka?
Dr.Maxamed Sh.Cabdiraxmaan Kaariye
Tiro koobyo kala duwan oo laga sameeyay xaaladaha furniinka ee cirka isku shareeray ee ka jira bulshooyinka Muslimiinta dhexdooda ayaa ah muuqaalo ku shaqlan cabsi iyo warwar hadheeyay muslimiin badan, waxa hadaba iswaydiin leh waa maxay sababaha keena furniinku, bal ila eega kuwa hoos ku qoran oon ka soo xigtay qoraalo laga qoray arinkan, idinkuna ku darsada ra’yigiina.
1. Heerka ku-dhaqanka diinta ee labada is qaba oo aad u kala fog sida xaaska oo diidan inay xijaabato ama tukato ama jecelba heesaha iyo muusikada. Ninka oo diidan inuu salaadda tukado, ama dumarka telifoonka kala sheekaysta, ama aan si wacan ugu dhaqmin diinta.
2. Ragga qaarkood oon dhabarka u ridan masuuliyada xaaska iyo reerka, ama faraha ka qaada masuuliyada caruurtooda, taasina ay culays laxaad leh saarto xaaska.
3. Ninka ama xaaskiisa oo midkood akhlaaq xun yahay, af xun yahay, caytamo, xishoon, ayna adag tahay in lala dhaqmo ama lala noolaado.
4. Xaaska oon adeecin ninkeeda, oon hadalkiisa maqal, ku madax adeegta amaradiisa la xidhiidha wixii Ilaahay xaq u siiyay, isla markaana aan ka soo bixin masuuliyada guriga, caruurta iyo ta reerkaba.
5. Ninka oo dulmi kula dhaqma xaaskiisa, u naxariisan, raxmad iyo dabacsani aan tusin, ama ku xad gudba xaqa Ilaahay u qoondeeyay xaaskiisa.
6. Xaaska oo ninkeeda culays aanu awoodin ka saarta dhinaca masruufka iyo nafaqada, kuna qancin wixii Ilaahay u qadaray ee risqiya, barbarna dhigta rag kale oo ka hodan san.
7. Ninka ama xaaskiisa oo ku ibtilooba balwooyin iyo dambiyo ay ka mid yihiin qaadka, shiishada, daroogada, khamriga iyo daawashada filimada jinsiga, taasina ay ku riddo nolosha guurka god madow ooy adag tahay in laga soo saaraa.
8. Cilaaqada lala leeyahay sodoga iyo sodohda oo aad u xumaata, taasina ay nolosha guurka ku keento gilgil iyo mushkilado horseeda furniin iyo kala tag xanuun badan.
9. Ninka ama xaaskiisa oo la sixro ama la cawryo taasina ay keento in midkood ka buuxsamo nacayb, cadho iyo karaahiyo uu u qabo ka kale, aragiisana uu ka diiqadoodo.
10. Xaaska oo ninkeeda siin wayda xaqiisa gogosha, kuna dadaalin inay ugu muuqato sawjkeeda muuqaal isaga xiiso galiya oo soo jiita, ama ayna isku howlin nadaafada jidhkeeda iyo dharkeeda. Dhinaca kale waa ninka oon isku taxalujin inuu daboolo baahida gogosha ee xaaskiisa, khaasatan markuu laba xaas leeyahay ooy dhacdo inuu midkood dayaco (kaasina waa dulmi weyn ee raggu hayska jiraan), inuu ninku sahashado nadaafadda jidhkiisa iyo dharkiisaba, taasina ay dhaliso anfariir iyo karaahiyo xaaska u diida inay soo ag jiifsato ama ka soo ag dhawaataba odaygeeda.
11. Xaalado badan oo furniin ah waxay dhacaan sanadada hore ee guurka (sanadka kowaad ama labaad), sababtuna waxay tahay labada qof ee is guursanaya oo runta isku sheegin. Waxa dhici kartaba inayna is arag (araga sharciga ah) ama ay been ka sheegeen da’dooda, ama ay qariyaan xaaladahooda caafimaad, guurar hore ooy soo mareen iyo arimo kale oo muhiima.
12. Is fahan la’aan ka dhalata iyadoon la wada hadlin, la wada niqaashin, su’aalo lays wadiin, miisna aan la soo wado fadhiisan si xal loogu baadho waxa mid walba ka tabanayo ka kale.
13. Qalabka iyo aaladaha xidhiidhka bulshada (social media) iyo khadadka telifoonka oo si xun loo isticmaalo sida kuwa lagu baashaalo ama lagu haasaawo oo keena iska shaki iyo kalsoonida oo lunta, amaba dhalisa in waqti xad dhaafa lagu bixiyo inernetka ilaa uu qofku noqdo maqane jooga.
Ilaahow adaa qaadiree is jeclaysii raga iyo xaasaskooda oo is fahansii, kana dhex saar fitnada iyo khilaafka, iskuna barakee.
Waa Maxay Fatwadu?
Ku Dayo Salafkii Oo Afuri Masaakiinta Sooman
Xaaskiisuu Dahab U Iibiyay Hooyadiina Wuu Ka Oohiyay
Tuko Intaad Nooshahay
Ramadaan Waa Maalmo Tirsan
Fikirka Fiminiiska : Qaylo Dhaan Lagu Hungoobay
Maxaa hadaba dadka loogu dhiiri galinwaayay inay raad raacaan bilowga bisha Muxaram?
Xukunka Xaamilada Soonku Dhib ku Yahay
Xukunka soonka maalinta Caashuura, iyo sida ugu fadliga badan ee loo soomi karo siday tahay
Qof Wali Wax cunaya iyadoo loo Adimayo Subixii
Qof Qalle lagu Leeyahay oo Doonaya Inuu Soomo Lixda Shawaal
Fataawadii Ugu Dambeeyay (Latest Fatwas)
Qof Aan Wayso qabin Inuu Akhriyo Qur’aanka
Xamuuradda Cidiyaha Iyo Weysada
Weysada Qofka Ay Kaadidu Joogto Uga Socoto
Fataawa diini ah
© Copyright 2018 FatwaSomali.com, Website made by Som Design Group